Social Media na Obi |tọ | Martech Zone
Social Media na Obi .tọ
N'afọ gara aga, edere m akwụkwọ Ndi Social Media Nwere Ike Depda Mbibi?. O yiri ka ọ nwere ike! Taa ka m nọ obi ụtọ mgbe ezigbo enyi na Indianapolis Mobile Ahịa guru Adam Small zitere m njikọ na-esonụ:
Obi ụtọ na-efe efe na netwọk mmekọrịta. Otu okwu:
Nchoputa ohuru egosiputara na netiti mmadu ndi mmadu, enwere obi uto n'etiti ndi mmadu rue uzo ato wepuru ibe ha. Nke ahụ pụtara na mgbe ị nwere ọ happyụ, otu enyi nke enyi ọ bụla nwere ike nwekwa ọ ofụ ka ọ dịkwa obi ụtọ.
Ha chọpụtara na ọ bụrụ na mmadụ akwụsị ị [ụ sịga, o yikarịrị ka enyi ọ nwere ike ịkwụsị ise siga. Ọzọkwa, ụyọkọ ndị mmadụ nwere ike ghara ịma ibe ha kwụsịrị ị smokingụ sịga n'otu oge ahụ, ndị edemede ahụ gosipụtara na akwụkwọ akụkọ New England Journal of Medicine na May.
Njikọ mmekọrịta na-emetụtakwa oke ibu. O yikarịrị ka mmadụ ibu oke ibu ọ mụbara site na 57 pasent ma ọ bụrụ na ọ nwere enyi ya buru oke ibu na oge enyere, Fowler na Christakis gosipụtara na akwụkwọ akụkọ na New England Journal of Medicine na July 2007.
Nke a bụ usoro dị ike nke anyị malitere ịmalite ịchọpụta na ịkwado dị ka ndị na-ere ahịa. Ọ dị mkpa ịghọta mmetụta a ka ị na-aga n’ihu ịzụlite usoro ịntanetị gị. Maka ịgụkwu etu ndị ahịa si emezi omume ha site na mgbasa ozi mmekọrịta, m ga-akwado ezigbo Razorfish Consumer Marketing Experience Report maka 2008.
Disemba 8, 2008 na 10:41 mgbede
Kekọrịta obi ụtọ gị niile na otu ọhụrụ http://www.smallerindiana.com akpọrọ “Akụkọ Na-atọ ụtọ”! http://www.smallerindiana.com/group/excitingnews
Dee 9, 2008 na 8: 11 AM
Echeghị m na ọmụmụ ihe ahụ bụ maka ndị enyi MySpace, LOL. Otu "netwọọdụ mmekọrịta" maka ebumnuche ọmụmụ ahụ bụ ndị maara ndị maara ndị mmadụ, Barbra Streisand gụnyere.
Omume obiọma a na-emeghị n'ịntanetị nwere ike inwe mmetụta yiri nke ahụ, n'agbanyeghị.
Disemba 9, 2008 na 1:26 mgbede
Enwere m ike ịhụ ebe ọmụmụ ihe ziri ezi na otú mgbasa ozi ọha na eze nwere ike isi mee ka ndị mmadụ nwekwuo obi ụtọ. N'ezie ọ dabere na obere ihe nlele ejiri. Ma ọ pụkwara inwe mmetụta ọjọọ ahụ? naanị igwu egwu ndị mmụọ ọjọọ na-akwado, mana mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịmepụta echiche nke "ndị enyi" mgbe n'eziokwu na ha abụghị. Ndị mmadụ nwere ike were ha dị oke egwu wee kụọ ụlọ okpuru ulo mgbe ha ghọtara na mmekọrịta na njikọ ndị a dị n'ịntanetị, ọ bụghịkwa ezigbo enyi.